You are here: Home / Cracks / SurfEasy VPN Premium Latest Version Cracked
app ayaa sidoo kale siinayaa xayaysiinta -tracker xanibeen halkaas oo blocks xayeysiis aad taas oo in markooda aad u hesho isku xirnaanta a hallayn karo oo ay si dhakhso ah oo xirfad lehna loo maamulo.
Waxaad kaloo qarin kartaa dhow juqraafi iyo cinwaanka IP si aad mar walba sii joogi gaarka ah iyo dheeraad ah si ammaan ah u shaqeeyaan online.
Waxay kuu siinayaa gaarka ah sida ugu badan in database muujinaysaa Gun ee Maraykanka ama wadan kale xitaa haddii aadan tahay degane ah waxaa si qofna fasho waxaad ka sinaba.
Waad haysan kartaa ka fog xiiseeyaan oo si qarsoodi ah caleenta markaana ay u helaan fududahay in goobaha hor istaagay meel kasta.
App wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhaaftaan firewalls xitaa aan xad lahayn iyo sidoo kale kaa caawinaysaa in aad tubada websites iyo apps aad fadilay.